ओली–दाहाल वार्तापछि मुख्यमन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाइयो « Janata Samachar
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा उत्पन्न विवाद समाधानको लागि अध्यक्षद्वय केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार पनि गहन छलफल भएको भएको छ ।
यसैबीच अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचकाे वार्ता सकिए लगत्तै केही मुख्य मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २, कर्णाली र सूदुरपश्चिम बाहेकका मुख्यमन्त्रीहरुलाई मंगलबार साँझ बालुवाटार बोलाउनु भएको हो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल केही अघिदेखि काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । पार्टीमा पछिल्लो समस्या अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच खटपट भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ र पोखरेल त्यसलाई मिलाउन सक्रिय हुँदै आउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलाएपछि बाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मंगलबार काठमाडौं आइसक्नुभएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । बोलाइएका मुख्यमन्त्रीहरुले आजै साँझ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
नेतृत्वबीचको विवादले पाटीमा समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि शनिबार मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुसँग गहन छलफल गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति सीको सन्देशसहित आइपुगे चिनियाँ रक्षामन्त्री
काठमाडौं । चिनियाँ रक्षामन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वेई फेङहे एकदिने ‘वर्किङ भिजिट’ का लागि आज
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले उठाएका सवालबारे
चिनियाँ रक्षामन्त्री फेङ्हो काठमाडौं आउँदै, यस्ता छन् आजका कार्यक्रम
काठमाडौं । जनगणतन्त्र चीनका राज्यपरिषद् सदस्य एवं रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हो एकदिने कार्यशील भ्रमणका लागि आज
अध्यक्ष ओलीद्वारा सचिवालयमा प्रस्तुत ५३ बुँदे प्रस्ताव (पूर्णपाठ)
पार्टी एकीकरण पछिका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासका केही प्रसङ्ग उल्लेख
काठमाडौं । चिनियाँ रक्षामन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वेई फेङहे एकदिने ‘वर्किङ भिजिट’ का लागि आज काठमाडौं आइपुगेका छन् । केही…
ओलीको जवाफमा नकारात्मक भाव तर ‘अब्जेक्टिभ्ली’…
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले उठाएका सवालबारे सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष तथा…
पार्टी एकताका आधारहरू
किन चाहिएको छ नेकपामा एकता ? एकता कसलाई चाहिन्छ ? पार्टी एकताका आधार के हुन सक्छन् ?
देशभरकाे माैसम सामान्यतया सफा रहने
महाशाखाका अनुसार हाल देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ ।
२०७७ मंसिर १४ गते आइतबारको राशिफल
स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । गुप्त शत्रु पर जानेछन् । नयाँ काममा खर्च हुनेछ ।
अध्यक्ष ओलीद्वारा सचिवालयमा प्रस्तुत ५३ बुँदे…
पार्टी एकीकरण पछिका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासका केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
ओलीले बैठकको मन्तव्य सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डको प्रस्ताव देशभर पठाइँदै
कालिकोटमा दलित बस्तीमा आगलागी, ७६ लाखको क्षति
सुनको भाउ तोलामा ६ सयले घट्यो
५ लाख खर्च गरेर तयार परिएको ‘डिपिआर’ नै गायब (भिडियोसहित)